I-Bacon Ushizi Oqoshiwe - Ungadliwa
ongakudla nesobho loshizi le-broccoli
indlela yokwenza curls ushokoledi zokuhlobisa
okuhamba kahle nge-zucchini othosiwe
I-Bacon Ushizi Oqoshiwe
I-Bacon Ushizi Oqoshiwe ! Uhlobo luni lomlingo lolu ?! Ukuhlanganisa ubhekeni noshizi we-cheddar nopelepele kuthatha okwejwayelekile isangweji loshizi eligosiwe ezingeni elilandelayo!
Ilungele isidlo sasemini esikhonzwe eceleni utamatisi isobho noma kuhle usuku lomdlalo noma ubusuku be-movie. Ushizi owosiwe onebhekeni uyinto ethokozisayo, egcwalisayo nenambitheka kumndeni oyintandokazi!
Indlela yokwenza i-Bacon Cheese Grilled
Qala ngesinkwa esinyene ngokwanele ukubamba ushizi ocibilikile futhi osindayo ngokwanele ukuze ungawi. Ushizi owosiwe ngebhekoni (kanye notamatisi uma kufanele ukhethe) udinga isinkwa esinenhliziyo enhle. I-Sourdough iyisinqumo esihle!
Pheka izingcezu zebhekoni zize zibe mnandi. Susa ubhekeni bese ukhipha konke ngaphandle kwesipuni esingu-1 samafutha ebhekeni asepanini.
Sabalalisa imayonnaise ngaphandle kwezingcezu ezimbili zesinkwa somuncu (noma isinkwa osithandayo).
Beka ushizi nebhekoni (notamatisi ongakukhetha) phezu kwezingcezu ezimbili zesinkwa nangaphezulu ngesinkwa esisele.
Grill lezo zingcezu zezulu phezulu!
Ukwenza Ushizi Obhekwe Ngobhekeni: Phinda uvuselele ipani opheke ubhekeni kulo ngokushisa okuphansi bese uvumela i-bacon grease incibilike ngokuphelele.
Ngomusa beka ubhekeni osikiwe oyisangweji wesemishi imayonnaise ohlangothini maphakathi nepani bese upheka kuze kube segolide. Flip bese uqhubeka upheka uze ubone ushizi uqhamuka ezinhlangothini.
Okufanele Ukukhonze Ngoshizi Ojiwe
Konke kuhamba nesangweji likashizi eligosiwe!
Ngokwesiko, kuhle ngesobho sikatamatisi (noma noma yikuphi isobho iresiphi uyathanda)! Ngosuku olufudumele, sithanda ukungeza kufayela le- isaladi elilahliwe nge-vinaigrette e-tangy. Futhi akukho okunambitheka kangcono kunokukugeza konke ngengilazi ebandayo ye I-Watermelon Lemonade !
Ama-sandwich amaningi ashiziwe
I-Jalapeño Ushizi Oqoshiwe - ukujija okubabayo
I-Pizza Eyosiwe Ushizi - izintandokazi zawo wonke umuntu zihlangene!
I-Dill Pickle Bacon Ushizi Oqoshiwe - i-classic ene-crunch
Isangweji le-Mac nelishizi - ukwelashwa okumnandi kwasemini!
I-Crispy Bacon Ushizi Oqoshiwe Up Rolls Ups - ukudla komunwe okuphelele!
Ushizi Omojiwe Womoya - kulula ukwenza
Isikhathi sokulungiselela10 imizuzu Isikhathi Sokuphekaishumi nanhlanu imizuzu Isikhathi Esiphelele25 imizuzu Izinkonzoezimbili amasangweji UmbhaliUHolly Nilsson Ushizi owosiwe wakudala uyiswa ezingeni elilandelayo ngokungeza ku-bacon yethu esiyithandayo! Phrinta Phina
▢4 izingcezu isinkwa somuncu
▢ezimbili wezipuni imayonnaise
▢6 izingcezu i-Bacon
▢ezimbili ama-ounces ushizi we-cheddar
▢ezimbili ama-ounces pepper jack ushizi
Pheka ubhekeni epanini uze uqhume. Susa kusuka epanini bese ukhipha, ugcine ukubhoboza isipuni esingu-1 epanini.
Sabalalisa imayonnaise ngaphandle kocezu lwesinkwa ngalunye.
Hlukanisa ushizi nebhekoni ngaphezulu kwezingcezu ezimbili zesinkwa nangaphezulu ngesinkwa esisele.
Hlangisa i-skillet encane emlilweni omncane.
Isangweji le-Grill kuze kube yigolide, cishe imizuzu engu-4-5. Flip and grill the other side until golden.
Amakholori:960,Amakhabhohayidrethi:74g,Amaprotheni:38g,Amafutha:57g,Amafutha agcwalisiwe:22g,Cholesterol:104mg,I-Sodium:1510mg,Potassium:3. 4. 5mg,Umucu:3g,Ushukela:4g,Uvithamini A:500IU,I-calcium:472mg,Insimbi:5.3mg
Igama elingukhiyeubhekeni ushizi owosiwe InkamboIsidlo sasemini KuphekiweWaseMelika© SpendWithPennies.com. Okuqukethwe nezithombe kuvikelwe i-copyright. Ukwabelana ngale recipe kuyakhuthazwa futhi kuyaziswa. Ukukopisha kanye / noma ukunamathisela izindlela zokupheka ezigcwele kunoma iyiphi imithombo yezokuxhumana akuvunyelwe nakancane. Sicela ubuke inqubomgomo yami yokusebenzisa izithombe lapha .